သွားအကြောထုတ်ကုသခြင်း(RCT) | D Royal Dental Clinic
သွားအမြစ်တွင်းပိုင်းက ပိုးစား၍ ရောင်းရမ်း ကိုက်ခဲ နေသော (သို့မဟုတ်)ပိုးစား၍ပုပ်သွားသော သွားအကြောအား သွားအကြောထုတ် ကိရိယာများကို အသုံးပြု ၍ သွားအမြစ်တွင်း မှကုန်စင်အောင်ရှင်းလင်း ဆေးကြောပီး သွားအမြစ်ထဲ သို့ သွားအကြောတုလေးထည့်ကာ
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ RCT လုပ်သင့်ပါသလဲ။????
???? သွားဂလိုင်ပေါက်ထဲသို့အစာဝင်လျှင် ကိုက်ခဲသောသွားများနှင့် ဖိမိလျှင်နာသောသွားများ။
???? သွားမြစ်ထိပ်နားရှိ သွားဖုံးတွင် ပြည်တည်နေသောသွားများ။
???? Accident တစ်ခုခုကြောင့် ဆိုးဆိုးရွားရွားပဲ့သွားသောသွားများ နှင့်အမာကိုက်ရင်းပဲ့သွားသောသွားများ
???? ဘေးသွားနှင့်ယှဉ်လျှင် အရောင်ပြောင်းနေသောသွားများ
???? အပူအအေးစသည့် အရည်များသောက်လျှင်ကျင်သွားသောသွားများ
???? သွားတိုက်တံအမာနှင့်ဘေးတံစောင်းတိုက်ခြင်းကြောင့်သွားခြေရင်းနားတွင် တဝက်လောက် ချိုင့်ဝင်နေသောသွားများ
RCT လုပ်တော့မည်ဆို လျှင် ဆေးခန်းကိုဘယ်၂ ခေါက်လာရပါသလဲ။????‍⚕️????‍⚕️????‍⚕️
ကျွန်တော်တို့ဆေးခန်းမှာ သွားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပီး Single Visit Rct လုပ်နိုင်ပီး ဖြစ်လို့ ဆေးခန်းကို ခနခန မလာနိုင်သူမျာအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာစေမှာဖြစ်ပါသည်။
တချို့ခက်သော အံသွားများအတွက်မှု ဆေးခန်းကို ၂ခေါက်သုံးခေါက်လာပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
RCT လုပ်ရင် အရမ်းနာကျင်မှုရှိပါသလား။????????????
ခုချိန်မှာတော့ပုံမှန်ထုံဆေးထက် ၂ဆပိုပြင်းသော ထုံဆေးများပေါ်နေသောကြောင့် RCT ကို နာကျင်မှုမရှိပဲသက်တောင့်သက်သာဖြင့်ကုသနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။☺️☺️☺️
RCT လုပ်ပီးရင် Crown ???? စွပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား။
သွား အကြော ထုတ် ထားသော သွားသည် (ကျန်းမာသောသွားများကဲ့ သို့ထောက်ပံ့ပေးသည့် သွေးကြောများ မရှိသောကြောင့်)အချိန် ကြာ လာ တာနဲ့ အမျှ သစ်ကိုင်းခြောက် လို ကျွတ်ဆက် ပီး ပဲ့ကျ တက် ပါသည် ။
ထိုကြောင့် စားသည့် ဝါးသည့် ဒဏ် ကို ရေ ရှည် ခိုင်ခံမှု ရှိစေ ရန်အမြန်ဆုံး သွားတုအစွပ် (Crown)???? ပြန် လည် စွပ်ပေးသင့်ပါသည် ။
RCT လုပ်ရင် ဓာတ်မှန်ရိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။☑️
RCT လုပ်နေစဉ်အတွင်း မိမိသွားအမြစ်အခြေအနေ သိ ရှိနိုင်ရန် နှင့် RCT လုပ်ပီး အကြောတုထည့်ပီးနောက် မိမိကုသသည့်သွား ကောင်းလားမကောင်းလား စစ်ဆေးနိုင်ရန် အနည်းဆုံး ဓာတ်မှန်အသေးတစ်ချပ်ရိုက်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
သွားအမြစ်အတွင်းသို့ သွားအကြောများကုန်စင်အောင်မထုတ်ထားပါက တချိန်ချိန်တွင်ပြန်ကိုက်နိုင်ပါသဖြင့် RCT လုပ်ထားသည့်မိမိသွားကို စစ်ဆေးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
RCT ပြု လုပ်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုး ကဘာလဲ။????
(1) သွားကိုက်ခြင်း ဝေဒနာ များ ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်း သွား ခြင်း ။
(2)မူ ရင်းသွား အတိုင်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် စား ရဝါးရတာ ကောင်းခြင်း ။
(3)သွားမနူတ်ထားခြင်းကြောင့် သွားဖုံးများ မနိမ့်ခြင်း ၊ပါးများမချိုင့် ၍ အရွယ်မကျခြင်း။
(4)အကြော ထုတ်ကု သသည့်သွားကို သာအစွပ်စွပ်ခြင်း ကြောင့် တစ်ချောင်း စာပဲကုန်ကျခြင်း။
ထို့ကြောင့် RCT လုပ်ခြင်းသည် မိမိအဖိုးတန်သွားတစ်ချောင်း မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် ကာကွယ်ရာရောက်သည့်အတွက်ကြောင့် သွားကိုက် လာ လျှင် အလွယ်တူ မနူတ်ပစ်သင့်ပဲ မိမိသွားကို အရမ်း အခြေ အနေမဆိုး ခင် သွားဆေးခန်း တွင် ကုသမှု ခံယူ ကြပါ လို့ အကြုံ ပြုချင်ပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့ဆေးခန်းတွင် တခါသုံးပစ္စည်းများနှင့် သွားကိရိယာများကို ပိုးမွှားကင်းစင်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည့်အိတ်(Strilization Pouch)ထဲသို့ထည့်ပီး စနစ်တကျ ပိုးသတ် သန့်စင်ထားသောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာလာရောက်ကုသနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။????????????
Chat Box သို့မဟုတ် ????09979005387 ကို